Dowladda Somalia ayaa ka jawaabtay baaqyada caalamiga ah ee ka imanaya Beesha Caalamka… – Hagaag.com
Dowladda Somalia ayaa ka jawaabtay baaqyada caalamiga ah ee ka imanaya Beesha Caalamka…
Dowladda Federaalka Somalia ayaa soo saartay Warsaxaafadeed ay ugu jawaabeyso baaqyada caalamiga ah ee haatan kaga imaanaya Beesha Caalamka.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Dowladda Somalia:-
Dowladda Federaalka Somalia waxay si aad ah uga xumaatay inay aragto hadalada bulshada ee qaar ka mid ah saaxiibbadeeda caalamiga ah iyo saaxiibbada muddada dheer ay ku marin habaabinayaan sharciyada ay soo saaraan Hay’adaha Dowladda ee lagu ilaalinayo xuquuqda dimoqraadiyadda ee shacabka ee ay ku dooranayaan hoggaankooda.
Dadka Soomaaliyeed waxay u oomanaayeen fursad ay ku gutaan xuquuqdooda dimoqraadiyadeed oo ay ugu adeegsadaan awoodda codkooda doorashada hoggaamiyeyaashooda. Inkastoo maamulkani dadaal badan ku bixiyay himiladan, September 17, 2020, hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Somalia waxay isku raaceen in la joojiyo hannaankaas oo la qabto doorasho dadban taa bedelkeeda.
Sida ay dhammaantood goobjoog u ahaayeen sagaalkii bilood ee la soo dhaafay, laba ka mid ah toddobadii saxiixayaasha heshiiska 17-kii September, oo kala ah hoggaamiyeyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland, iyagoo ku dhaqmaya cadaadis ba’an oo kaga imanaya saameynta shisheeye, waxay isku dayeen inay hakiyaan oo afduubtaan howsha, iyagoo abuuraya dalab aan dhammaad lahayn iyo iyagoo ku baaqaya in la burburiyo hay’adaha dowliga ah ee qaranka.
Khataraha ka dhalan kara luminta horumarka la sameeyay illaa iyo hadda waxay ku kalliftay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka inuu ka doodo, oo u codeeyo 12-ka April 2021-ka, si loo ilaaliyo hay’adaha dalka. Go’aankan waxaa si ballaaran u taageeray daneeyayaasha muhiimka ah ee siyaasadda dalka, oo ay ku jiraan Dowladda Federaalka, Maamulka Gobolka Banaadir iyo saddex ka mid ah shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah Federaalka, kuwaas oo kala ah Hirshabelle, Galmudug iyo Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Sida ku cad qodobka 47aad ee dastuurka KMG ah ee Somalia, Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Somalia wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro sharciyo gaar ah oo qeexaya xeerarka khuseeya doorashooyinka heer federaal.
Sidaa darteed, sharciga uu soo ansixiyay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka 12-kii April 2021 oo dhigaya in hal qof, hal cod doorasho lagu hirgeliyo dalka ayaa meesha ka saaraya qorshe kasta oo horey loo gaaray, oo uu ku jiro heshiiskii 17-kii September 2020. Asal ahaan, sharcigani wuxuu dalka siinayaa fursad ay ku fuliyaan mid ka mid ah xulashooyinka ay soo jeediyeen Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka (NIEC), oo horay u soo saaray dhowr fursadood oo la fulin karo, oo ay ku jiraan khariidad lagu dhameystirayo doorashooyinka 13 bilood gudahood.
Inkastoo aan ka mahadcelinno walaacyada saaxiibbadeen iyo saaxiibbadeenna caalamiga ah ee ku aaddan xasilloonida iyo nabadgelyada Somalia, haddana waa wax laga xumaado in markhaati laga noqdo u ololeynta mabaadi’da dimoqraadiyadda oo ka gaabinaysa taageeridda himilooyinka dadka Soomaaliyeed ee ah in ay ku dhaqmaan xuquuqdooda dimoqraadiyadda.
Hadalada xanafta leh ee ay ku raran yihiin hanjabaadaha, ee wax u dhimaya madaxbanaanida siyaasadeed iyo xuquuqda madaxbanaan ee hay’adaha qaranka, waxay kaliya u adeegi doonaan dhiirigelinta ururada argagixisada iyo kuwa nabadiidka ah ee Somalia.